Afaka manamboatra milina fanodinana alimina amin'ny alàlan'ny alàlan'ny alimina ny alim-bary
Home / Induction Melting Furnace / Aluminum Fusion Furnace / Milina fanodinana aliminioma
Aluminum dia afaka manamboatra milina
Sokajy: Aluminum Fusion Furnace, Induction Melting Furnace, Afo Fandoroana vy Tags: Al Afaka manamboatra fitrandrahana, Aluminium dia afaka manodina, Alimina dia afaka miorina, Alim-bary afaka mandoro fofona, Aluminium dia afaka manamboatra fitrandrahana, Aluminium dia afaka manavao ny indostria, Aluminium dia afaka manamboatra milina
Ny top 200 ^ 1200kg Induction Aluminuim dia afaka manamboatra milina fanodinana sy famonoana alimina, rambony, boasary ary kitay.
Ny alim-bary fanodinana alika / alikaola / bozaka fanodinana fatana dia hametraka ny alim-bary na ala / ala ho toy ny fiampangana ao amin'ny foiben-jiro fanodinana alimina ary manomboka ny lafaoro hanomboka ny dingan-dava. Fanampiana alim-bika maro kokoa ity dingana ity dia azo raisina satria aluminium ny alika mivadika kokoa ny hafanana.
Rehefa tonga any amin'ny 1220.66 ° F ny hafanan'ny alim-bary dia mitodika amin'ny rano. Ny sisa tavela amin'ny loko sy ny loko avy amin'ny fitoeran-drano dia hitifitra eny ambonin'ny tany. Ity fitaovana ity dia antsoina hoe totozy ary azo avahana amin'ny kitapo misy vy. Mila miala sasatra aloha izy vao azo alamina tsara.
Aorian'izay, ny tavoahangy (lafaoro) dia handrotsaka alimina madio. Amin'ny ankapobeny, ny rafitra Hydraulic tilting dia natao mba handefasana be dia be amin'ny metaly vody.
Farany, amin'ny fikarakarana, ny alimina manga dia harotsaka anaty baolina mba handrodana ary avy eo hialana amin'ny fampiasana azy.
AAzo atao ny manamboatra milina fanodinana aluminio:
2, fanamafisana haingana, ny fehezan-koditra ara-potoana marina
Fanamafisam-peo elektromagnetika Ny fomba dia amin'ny alàlan'ny famolavolan-tseranana maotera dia manasitrana haingana haingana, ny haingam-pandehan'ny Aluminium. Ny fanaraha-maso ny mari-pana dia ara-potoana sy marina, izay manatsara ny kalitaon'ny vokatra ary manatsara ny famokarana vokatra!
Ny fomba fampiasan'ny fandefasana herinaratra nentim-paharazana indostrialy dia ny fampiasana ny fanamafisana ny filaminana, ny filaminana mitam-piarovana ao amin'ny tontolo midadasika avo lenta mandritra ny fotoana maharitra amin'ny fampiasana oxidation dia miteraka ny fampihenana ny fiainam-piantsorohana, ny fikojakojana lehibe. Ny famokarana herinaratra fanodinana elektiragneta dia vita amin'ny fanjohian-tsambo sy ny telegrama avo lenta, noho izany ny fiainana an-trano dia lava ary tsy misy fikojakojana.
Ny fanamafisana ny fahaizan'ny SMJD famokarana herinaratra elektrônika amin'ny alàlan'ny famokarana alimo dia afaka manamboatra milina:
Mofomamy volamena madinika MF
Electric Aluminum Fusion Furnace